Andro: 12 Febroary 2020
Olom-bahoaka hiasa eo amin'ny sampana serivisin'ny ministeran'ny fahasalamana amin'ny fikambanana faritany ao anatin'ny faritry ny Andininy faha-657 amin'ny lalàna momba ny fanompoana sivily No. 4 (B) ary ny andininy 663 / A amin'ny lalàna momba ny laharana faha-45. [More ...]
Ny filoha ETO Metin Güler dia nanasongadina fa ny fizaram-by sy ny kongresy hotanterahina ao an-tanànantsika ny volana aprily dia hitondra anjara amin'ny hery mifaninana amin'ny Eskişehir sy ny fampiroboroboana ny sehatry ny rafitry ny lalamby manerantany. Lahatsoratra amin'ny Chamber of Commerce Eskişehir [More ...]
Nanambara ny ben'ny tanànan'i Ankara Metropolitan Mansur Yavaş fa miasa amin'ny zotra metro vaovao izay handalo ao Mamak izy ireo. Raha ny andalana vaovao izay hanitatra hatrany atsinanan'ny renivohitra dia mikasa ny hijanona enina, dia hikaroka loharano ho an'ny tetikasa. vaovao [More ...]
Namonjy ny alika ny mpiasan'ny Metro izay nitazona ny escalator tao amin'ny tobin'ny metro Kadıköy. Ny tompon'ny alika, Fatma Kamuran Koç, dia nitsidika ireo mpiangona tao amin'ny gara miaraka amin'ny alikany. Kadıköy - Tavsantepe Metro Line ao amin'ny gara Kadikoy [More ...]
Nanaiky ny fangatahana hampijanonana ny mpanatanteraka ny Fitsarana momba ny lalàmpanorenana (AYM) ary niresaka momba ny fangatahan'ny filohan'ny antoko Cumhuriyet Halk (CHP) Ergin Altay, Özgür Özel sy i Engin Özkoç ary 139 ny solombavambahoaka Kanal Istanbul. [More ...]
Mamaly ny fanontanian'ilay solombavambahoakan'ny CHP Istanbul Mahmut Tanal, Minisitry ny fitaterana Mehmet Cahit Turhan dia nilaza fa olona 6 no voaroaka tamin'ny fanompoana sivily ary mpiasa 1 no voasazy hotapahina isam-bolana. [More ...]
TateDireire Dirte régional 5 dia manohy ny fampiasam-bola amin'ny sehatra tompon'andraikitra. Notaterin'ny talen'ny faritra fa ny 2019 tapitrisa 21 87 TL dia novidiana tamin'ny tetikasa 600 tamin'ny taona 2. Tetikasa XNUMX any Malatya [More ...]
Raha te hampitombo ny kaontinao media sosialy ianao fa tsy dia mitombo kosa ny mpanara-dia anao, https://takipciodasi.com/ Azonao atao ny manambara ny kaontinao Instagram amin'ny vahoaka marobe amin'ny alàlan'ny fitsidihana ny tranokala, amin'ny alàlan'ny fitrandrahana ny bonus isan'andro sy ny serivisy fanampiny isan'ora. Amin'izao fotoana izao, [More ...]